Best 24 Scorpion Atụmatụ Echiche Ebumnuche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Best 24 Scorpion Atụmatụ Echiche Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Kedu ka i nwere ike isi na-atụ egwu mgbe a na-abịakwute tattoos? Ị hụla ndị na-ebu akpị akpụ? A na-ejikọta egbugbu akpịrị na ọtụtụ akụkọ ifo, egwu na ọbụna echiche nke anwansi. Otú ọ dị, egbu egbu akpọrọ nwere ihe dị mkpa n'ihi na ọtụtụ ndị nwere echiche dịgasị iche banyere ndị na-egbu egbu a.
Ogbugbu #scorpion pụtara ọtụtụ ndị si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ọnwụ ahụ bụ ihe atụ ma na-adabere na ya na omume nke ihe e kere eke. O nwere ike na-anọchite anya nwoke na nwanyị na-enwe obi ụtọ ma na-enwe mmekọahụ n'ihi ụdị ịgba egwú ọ na-eme mgbe a na-eme ya. A na-eji ndị Mayans na-anọchite anya ịwa ahụ na-ejikwa akpụrụ dị iche iche na-eme ihe dị iche iche, na-emekarị ihe ọjọọ. Enwere ike iji ya mee ihe nchedo ma na-anọchi anya onye agha.
Ọtụtụ ndị lanarịrị ọrịa cancer na-eji tattoo mee ka ha kọọ akụkọ banyere njem cancer ha. A na-ahụkarị ndị na-alụ ọgụ ma ọ bụ ọbụna ndị na-eti ọkpọ na-eji egbu egbu egosipụta ndị ha bụ. Ogbugbu akpiri ahu putara iguzogide na mgba ka ndi mmadu na-ewere ya dika ndi kwesiri ntukwasi obi, ndi kwesiri ntukwasi obi. A pụkwara iji egbu egbu na-ekwu banyere agụụ, ike, ọgụ, ntachi obi, nchebe, nnọgidesi ike, nchebe, ọnwụ, iguzosi ike n'ihe na ihe ọjọọ.
Ị kpebie ihe ịchọrọ igbu akpị gị pụtara nye gị. E nwere ụdị ọnya dị iche iche nke nchupu #designs nwere ike ịhọrọ ma onye ọ bụla n'ime ha nwere nkọwa ha. Otú ọ dị, ịnwere ike ịmetụ egbugbu gị iji kọwaa ihe dị iche.
Ụfọdụ states na distrikti na-achịkwa ndị na-ewu mmiri na ndị na-egbu egbu na America. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na mmadụ enweghị ike ịbanye n'ime ụlọ ya n'ihi na a na-enwe ike iji ígwè egbu egbu via
Ụdị Oké Ọkpụkpụ
Inwere akpiri akpiri site na igwe na-achoghi ajuju na ndi okachamara apughi ime ka gi na onye omenkà, na ihe ize ndụ ruo mgbe ebighi ebi na-emeri oria a na-enweghi ike ime, dika ima, oria ojoo ma obu ihe ojo ohia nke umu ihe omumu microscopic. via
Ụdị Ọkpụkpụ Aka
egbu egbu bụ ụdị nkwupụta onwe onye, ​​ma ndị na-ahọrọ igbu akpị ma ọ bụ ahụ mmadụ kwesịrị ịbanye n'ọfịs a na-enye ikike ma wepụta ohere iji kọọrọ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ akpịrị akpịrị. via
Ụdị Akara Akara Akara
Kedu ihe ọ ga-abụ ịnwe akpịrị akpị dị ka nke a? Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ahụwo ọtụtụ narị ndị na-eji akpị akpị a mee ihe iji chọọ onwe ha mma. Onye ọ bụla nwere echiche nke aka ya nke ịhụ egbu egbu. via
Ụdị Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ
Anyị na-akwado ndị na-achọ igbu akpị iji nweta ọrụ ha. Chọta ezigbo ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ ma rịọ maka nleta - ụlọ ahịa ahụ kwesịrị ịdị ọcha ma dị ọcha. Gbalịa ka ị ghara ịdị umeala n'obi iji soro ndị ọkachamara na-akparịta ụka banyere usoro nchedo. via
Ụdị Ọkpụkpụ Leg
Ndị mmadụ ole na ole dị ka ya mgbe ụfọdụ na-adịghị, ọ bụkwa ihe ziri ezi na ihe kpatara na ọ bụghị ụfọdụ tii. N'ime iri afọ ole na ole gara aga, a kwadoro ụdị ọrụ ahụ na ọha na eze, a na-elekwa ndị mere ya anya dị ka nnupụisi. via
Ụkwụ Akpụ Akpụ Ejiri
Ụdị Epeepe Ọkpụkpụ
akwara akpọnwụ na ịkpụ ụkwụ dịkwuo nchebe karịa oge ọ bụla ọzọ, mana tupu ị ghọọ onye nwe ụlọ obi ụtọ, ọ dị mkpa iji nweta ọrụ gị. Ndị ọrụ nkà na-atụkwasị obi ka ha jidesie nkwekọrịta dị mma nke ọma. via
Ụdị Ọkpụkpụ Skeletal
Site n'ịgbaso usoro nhazi nke ọma, ndị ọkachamara na-egbu egbugbu na ndị ọkpụkpụ ahụ na-echebe onwe ha na ndị ahịa ha site n'ọtụtụ ọrịa na microorganisms ndị nwere ike ịkpata ọrịa. via
Ụdị Star Scorpion
akwara akwara bụ atụmatụ na akpụkpọ ahụ a na-eme na ọkwá na ink na-ehicha. Inwe "inked" bụ nhọrọ dị ịrịba ama. Cheta na egbu egbu na-aga nke ọma mgbe niile, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dị iche iche iji kpochapụ akpịrị akpị, usoro a dị oké ọnụ ma dị njọ. via
Ụdị Ọkpụkpụ Ụkwụ
Ụdị aghụghọ nke egbu egbu
A gaghị eleghara ụdị igbu egbu egbu dịka nke a. Mma na echiche ọ na-eme na onye na-ekiri ya na-ekwu okwu n'olu dara ụda. isi iyi
Ụdị Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ Maka Ụmụ nwoke
Ogologo oge a na-eme ka ọkpụkpụ akwara bụrụ ihe nkịtị na anyị na-ahụ ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime mmadụ anọ. Egwuregwu ntụgharị bụ #art ọrụ ndị ejiworo na-anọchite anya ọtụtụ ihe ma na-ekwu maka ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ akwaa ụta na ha nwere akwara akpịrị n'ihi na ha emeghị ya maka ya. isi iyi
Egwu egbu egbu aghọwo otu n'ime ngwa ejiji nke anyị na-ahụ n'ahụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Oge na-aga mgbe a na-ele akpịrị akpị anya dị ka ihe dị ọcha. N'ụwa niile, ndị mmadụ nabatara ịma mma na ozi nke a na-eji akara akpịrị na-agafe. isi iyi
Kasị Ụdị Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ
Were dịka ọmụmaatụ, olee otu ọ na-adị gị ka ị nwere ụdị egbugbere ahụ mara mma dị ka nke a? Nke a bụ otu akpịrị akpị nke ghọworo ihe na-emekarị n'ime afọ. Ihe ka ọtụtụ n'ime anyị abịawo ghọta ọrụ nkà dị ịtụnanya anyị nabatara n'akụkụ dị iche iche nke ahụ anyị ichetara anyị ugbu a, n'oge gara aga na ọbụna ọdịnihu. isi iyi
Ihe eji egbu egbu aghọwo otu n'ime ihe osise kachasị ochie nke ụmụ mmadụ chepụtara. Ọdịdị ahụ aghọwo ụdị nkwupụta ma ọ bụ nnupụisi dabere na ihe eji ya. isi iyi
Ụdị Ọkpụkpụ Egwu
E nwekwara ndị na-egbu egbu dị ka ụdị ihe ịchọ mma. isi iyi
A na-enwe mmasị magburu onwe ya maka igbu egbugbu ma ọ bụrụ na ọ bụ nhụjuanya dị egwu n'ahụ gị. Akụkụ nke ahụ ebe ịchọrọ igbu akpị na-eche ọtụtụ ihe. isi iyi
Pịa ebe a ka o nwekwuo Atụmatụ
Tags:akpị akpị egbugbu maka ụmụ agbọghọ egbu egbu maka ụmụ nwoke
rip tattoosagbụrụ eboima ima mmaarịlịka arịlịkadi na nwunyeakpị akpịọnwa tattoosegbu egbu mmiriechiche egbugbuegbu egbu egbuudara okooko osisikoi ika tattoozodiac akara akaran'olu oluAnkle Tattoosna-adọ aka mmangwusi pusiegbu egbuEgwu ugoegbu egbu okpuna-egbu egbuokpueze okpuezeaka akaUche obiọdụm ọdụmmma tattoosụmụnne mgbuegbu egbu osisi lotusegbu egbu hennaGeometric Tattoosegbu egbu ebighi ebiụkwụ akaenyi kacha mma enyiaka akaegbugbu maka ụmụ agbọghọenyí egbu egbuegwu egwunnụnụazụ azụaka mma akaegbugbu egbugbuNtuba ntughariakara ntụpọndị mmụọ ozimehndi imeweegbu egbu diamondndị na-egbuke egbukeỤdị ekpomkpaegbu egbu maka ụmụ nwokeakwara obi